Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Wayn oo Kadhacay Magaalada Muqdisho.
Qarax Wayn oo Kadhacay Magaalada Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ September 3, 2018
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay weerar ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhuftay afaafka hore ee xarunta Degmada, waxaana qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan uu gilgilay magaalada oo idil.
Qoraal kooban oo lagu qoray baraha Internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in Weerar Isqarxinta ah ay la beegsadeen xarunta maamulka Degmada Howlwadaag, kaasoo ay sheegteen in khasaare ugu gaysteen cadawga waa siday hadalka u dhigeene.
Wararka ayaa sheegaya in ay ku dhinteen sadex qof mid ka mid ahna uu yahay Askari ciidanka ka tirsanaa iyo dhaawac ay jirto, hase ahaatee tiro rasmi lama hayo, gaadiidka gurmadka deg degga ayaa sheegaya in ay qaadeen dhaawaca illaa 15 ruux oo carruur u badan yihiin. Waxaa kaloo lagu arkay goobta qof meyd ah oo loo malaynayo qofkii gaadhiga waday.
Dadka dhaawaca waxaa ku jiro Guddoomiye kuxigeenka Degmada Howlwadaag ee dhinaca amniga iyo siyaasadda. Qaraxa ayaa gebi ahaanba burburiyay xarunta degmada iyo xafiisyadii ku yiilay oo ay ku jiraan xafiiska Guddoomiyaha iyo kuxigeenadiisa.
Sidoo kale Qaraxa ayaa gebi ahaanba burburiyay dugsi Qur’aan iyo masaajid ku dhow xarunta degmada. Khasaaraha ugu badan ayaa soo gaaray carruur dhiganeysay dugsi qur’aan oo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay qaraxa.
Wararka ayaa sheegaya in carruur la la’yahay, waxaana burburka dhismaha dugsi qur’aanka lagu arkay haraadiga jir bani’aadam oo laga aqoonsaday gacamo iyo lugo go’an. Qaraxa lagu weeraray xarunta Degmada Howlwadaag ayaa ah kii 2aad oo noociisa ah, iyadoo sanad ka hor weerar is qarxin kala degtay xarunta Degmada Wadajir, kaasoo dad ka badan 15 ruux ku dhinteen.